Nagu saabsan - Tianjin Tech Tech. Co., Ltd.
Tianjin Daacad Tech. Co., Ltd.
Tianjin Daacad Tech. Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2014, oo ah soo saare xirfadlayaal ah isla markaana dhoofisa oo ka walaacsan naqshadeynta, horumarinta iyo soo saarista BADBAADADA JIDHKA, TOWELS iyo LIGHT LED. Waxaan joognaa Tianjin, oo ah mid ka mid ah dekedda ugu weyn waqooyiga Shiinaha. Dhammaan alaabooyinkeennu waxay u hoggaansamaan heerarka tayada caalamiga ah waxaana si weyn looga mahadceliyaa suuqyo kala duwan oo adduunka ah. Xarumaheena sifiican u qalabeysan iyo tayada tayada sare leh dhamaan heerarka wax soosaarka waxay awood noo siineysaa inaan damaanad qaadno wadarta qanacsanaanta macaamiisha.
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay ee wax soo saarka iyo maaraynta iyo sahaminta, Honest waxay dejisay nidaamkeeda maaraynta tayada u gaarka ah. Fariidnimo daacad ah sannadihii la soo dhaafay ayaa had iyo jeer ku dhegan "in dadka kor la saaro, in dadka si daacadnimo leh loola macaamilo" ujeeddooyin ganacsi. Waxaa ka go'an inay ku siiso alaab tayo sare leh iyo adeegyo tayo leh. Hayso xirfadle, koox maarayn qaabdhismeed heersare ah, dhinac kasta iyo geeddi-socodyada ayaa si adag u tijaabinaya una xakameynaya.
Sidaas darteed alaabteenna tayada sare leh iyo adeegga macaamiisha ee aadka u sarreeya, waxaan helnay shabakad iib ah oo caalami ah oo gaareysa Britain, America, Japan, Germany, Spain, Italy, Sweden, France iyo Russia, iwm.
Ganacsigeenna ugu weyn waxaa ka mid ah ilaalinta jirka, tuwaallada, iyo nalalka laydhka. Waxaan ku siin karnaa dhabarka dambe, taageerada dhexda, taageerada jilibka, taageerada canqowga, tuwaalka qubeyska, shukumaanka nadiifinta ee gaariga oo faahfaahsan, tuwaalka timaha oo si dhakhso leh u qalajinaya, iyo tooshka, madaxa, baaskiilka, iftiinka quusidda, iwm. Iyo haddii aadan helin alaabooyinka aad xiiseyneyso, fadlan xor ayaad u tahay inaad nala soo xiriirto, waanan ku faraxsanahay inaan ku caawinno.
Haddii aad xiiseyneyso mid ka mid ah alaabtayada ama aad rabto inaad ka wada hadasho amar qaas ah, fadlan si xor ah ula xiriir nala soo xiriir.